Umehluko ongu-10 Phakathi Kokumaketha Kwe-Classic ne-Social Media | Martech Zone
Umehluko 10 Phakathi Kokumaketha Kwe-Classic ne-Social Media
NgoLwesibili, Okthoba 15, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kwakhe blog yezokumaketha, URobert Weller wafingqa umehluko omkhulu oyishumi phakathi kokumaketha kwezokuxhumana zakudala nezenhlalo kusuka encwadini kaThomas Schenke I-Social Media Marketing und Recht kulokhu infographic.
Uhlu luphelele, lunikeza izinzuzo zejubane, ukwakheka, unomphela, amapulatifomu, ukuba semthethweni, ukuqondiswa, nezakhiwo zokuxhumana. Kunabaqondisi abaningi bezentengiso bendabuko abasebenza ezinkampanini kulezi zinsuku abangakaboni umehluko noma baqonde izinzuzo - ngethemba ukuthi le infographic isiza ukukhomba izici ezibalulekile.
Tags: ukumaketha okudalainfographici-robert wellerezokuxhumana zenziwe kahleimithombo yezokuxhumana und rechtthomas schenkemthokotoushenne.de
Ukumaketha kokuqukethwe kwezindawo ezithengiswayo
I-DemoChimp: Shintsha amaDemo Akho
Okthoba 16, 2013 ngo-8: 58 AM
okokuqala ngiyabonga kakhulu ngokwabelana nge-infographic yami, ngiyajabula ukuthi ukuthole kuwusizo!
Okwesibili, ngivele ngiyivuselele ukuze ngiyenze ikhange ngokwengeziwe. Uxolo ngokungaphazamisi kangako 😉 Uzothola inguqulo 2 kubhulogi lami (isixhumanisi esifanayo osisebenzise ku-athikili yakho).
I-Oct 16, i-2013 ku-1: i-41 PM
Kuyamangalisa! Kubuyekezwe - ngiyabonga kakhulu uRobert.
I-Oct 16, i-2013 ku-4: i-28 PM
Nov 6, 2013 ngo-3: 04 AM
Umehluko we-10 Phakathi Kokumaketha Kwe-Classic ne-Social Media- le impela yindatshana enhle. Ngezinye izikhathi besifuna umehluko phakathi kweClassic and Social Media Marketing, futhi nansi ngathola impendulo. Ngiyabonga
Jan 11, 2016 ku-8: 34 AM
I-infographic ewusizo kakhulu… (ngereferensi ofc) ngiyisebenzisela inkulumo yami. Ngiyabonga kakhulu!
Nov 28, 2016 ngo-10: 11 PM
Ukuqhathanisa okuthakazelisa kakhulu mayelana nokumaketha kwakudala nokumaketha kwedijithali. Nge-inthanethi, singasebenzisa isabelomali esiphansi futhi sithole imiphumela efanayo. Siyabonga ngokwabelana.